Norway oo Tarxiishay Darawal Gaarigiisa ku xiriwaayay Lugaha Barafka (vinterdäck) Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaNorway oo Tarxiishay Darawal Gaarigiisa ku xiriwaayay Lugaha Barafka (vinterdäck)
Norway oo Tarxiishay Darawal Gaarigiisa ku xiriwaayay Lugaha Barafka (vinterdäck)
February 15, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Norway 0
AP Photo / Matthias Schrade
Booliska Norwey ayaa masaafuriyay darawal kaxeynayay gaari Nuuca Xamuulka oo aysan ku xirneyn lugaha Barafka magaalo ku taal Arctic Circle.
Muwaadinkan ajnabiga ah ayaa labo jeer booliska joojiyeen hal saac gudahood agagaarka Tromsø maalintii talaadada aan soo dhaafnay, sida ay masuuliyiintu sheegeen.
Darawalka waxaa lagu amray inuu gaarigiisa ku xiro lugaha barafka laakiin wax yar ka dib ayaa mar kale lagu joojiyay Tromsøbrua isagoo aan gaarigiisa ku xirin lugaha barafka, ”sida ay sheegeen booliska.
Gudaha Norway, gawaarida culus waxaa looga baahan yahay inay adeegsadaan silsiladaha barafka laga bilaabo bartamaha Nofeembar ilaa dhamaadka bisha Maarso iyadoon loo eegin xaaladaha waddooyinka ee waddamada Scandinavia.
Agaasinka soo galootiga dalkan Norway ayaa go aansatay in eedeysanaha la masaafuriyo iyadoo laga mamnuucay soo galida ama kaxeynta gawaarida xamuulka ee Norway mudo labo sano ah.
Darawalka aya arbacadii loo tarxiilay dalka dibaddiisa sidoo kale wuxuu aqbalay ganaax dhan 11,000 oo karoon ah oo u dhiganta 1,072 Dollar.
“In la kaxeeyo gawaarida xamuulka ah iyadoon la qafiifinayo shuruudaha waxay keenaysaa khatar weyn,” ayuu yiri kormeeraha bilayska Per Øyvind Skogmo.
Masuuliyiintu ma shaacin magaca iyo dhalashada darawalka.